Astaanta Dabka iyo Isgoyska Xayawaanka ayaa laga saaray Google Play ee Belgium | Androidsis
Nintendo waxay dib u xasuusataa Astaanta Dabka iyo Isgoyska Xayawaanka ee suuqa Biljamka ee sanaadiiqda bililiqada
Beljamka waxay talaabo culus ka qaadeysaa sanaadiiqda bililiqada Marka hadda waxaan ognahay in Nintendo uu joojin doono daabacaadda Astaanta Dabka iyo Isgoyska Xayawaanka sababtaas awgeed Google Play Store. Sanduuqyada la bililiqeysto ee ku saleysan isla booska iyo nidaamka bingo isla markaana ay ku helayaan tobanaan kun oo balwadaha adduunka oo idil.
Waxay noqon doontaa cadaalad Ogosto 27-keedii markii ay Biljamka wax arki karin dheeraad ah labadaas kulan. Taasina waxay tahay in Belguimku ku dhawaaqay in sanduuqyada bililiqeyntu ay yihiin ciyaaro nasiib ah oo ay sharci darro ka yihiin waddanka, sidaa darteed Nintendo ayaa tallaabo ka qaaday arrinta si ay uga noqoto labadaas kulan ee loo yaqaan 'freemium'.
Bayaanka laga qoray Nintendo bartiisa Twitter-ka ee Belgium, waxaa lagu cadeeyay ciyaaraha soo socda ee shirkadda Japan iyada oo ku saleysan qaabka khamaarkaas lagama bilaabi doono dalka.
Maxaad u maleyn laheyd inaad ka takhalusi laheyd sanduuqyada bililiqada labada kulan, goorma waxay ku saleysan yihiin qaabkaas lacag sameyntaWaxay noqon laheyd wax badan oo waalan. Gaar ahaan marka nidaamkaas khamaaristu gebi ahaanba yahay mid xadgudub ah oo loogu talagalay in lagu dhejiyo isla wakhtigaas iyada oo la adeegsanayo mikropayments-ka si loo isku dayo in nasiib loogu yeesho sanduuqyadaas bililiqada ah.
Muhiimadu waxay ku saabsan tahay waxaas oo dhan, marka laga reebo dhaawaca noocyada noocan ah ay ku sameynayaan warshadaha, taasi waa taas dalal badan ayaa bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan oo ah sida nidaamkan sanaadiiqda bililiqeysiga ahi u yahay mid aad waxyeello u leh, maaddaama oo ay dhigayaan saldhigyo waxyeello keenaya inta ay "wasakhdayaan" waxa noloshiisa oo dhan ka ciyaarayay qalabka kombiyuutarka, PC ama nooc kale oo madal ah.
Waxaan rajeyneynaa taas shirkado badan ayaa qaada raadadka Nintendo sida dhammaan waddamadaas oo sharciyada cusub lagu soo rogo si looga hortago faafitaanka nidaamkan khamaarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nintendo waxay dib u xasuusataa Astaanta Dabka iyo Isgoyska Xayawaanka ee suuqa Biljamka ee sanaadiiqda bililiqada
Falanqaynta Ezviz CTQ3W, kamaradda ilaalada wifi